घनेन्द्र ओझा काठमाडौं, २० असार
‘यस्तो पनि हुँदो रहेछ जिन्दगीमा कहिले कहिले’ होस् वा ‘यस्तै रहेछ यहाँको चलन’ अथवा चर्चित नेपाली चलचित्र ‘प्रेमपिण्ड’को ‘गैरी खेतको शिरै हान्यो’ आदि गीत नसुन्ने नेपाली को होला र !
उसो त चलचित्र ‘स्वर्ग’को ‘तिहारै आयो लौ झिलिमिली’ नै पनि त हरेक नेपालीले विशेषगरी दीपावली वा तिहारका बेला अत्यन्तै धेरै सुन्ने र गाउने गीतमा पर्छ ।
यी यस्ता कालजयी र लोकप्रिय अनि कर्णप्रिय गीत लेख्ने स्रष्टा हुन्, यादव खरेल ।
यादव खरेलको समग्र परिचय यतिमा सीमित छैन, हुनै सक्दैन । ‘प्रेमपिण्ड’ जस्तो ऐतिहासिक चलचित्र निर्देशन गर्ने उनै यादव हुन् भने ‘आदिकवि भानुभक्त’ जस्तो बायोपिक निर्देशन गर्ने पनि यादव खरेल नै हुन् । यी चलचित्रको आफ्नै विशेषता छ, जुन तल उल्लेख भएको छ ।
धार्मिक, सांस्कृतिक विषय लिएर उनले ‘श्री स्वस्थानी’ चलचित्र पनि निर्देशन गरे भने सामाजिक विभेदलाई केन्द्रमा राखेर ‘आँधीबेहरी’ बनाए । यसरी नै समाजमा गरिबीका कारण वा आपराधिक मनोवृत्तिका कारण सयौँको संख्यामा मुम्बईका कोठीमा बेचिइरहेका नेपाली चेलीका दुःख र सङ्घर्षका कथा समेटेर उनले ‘चेलीबेटी’ चलचित्रको निर्देशन गरे ।
त्यसबेला हास्य कलाकार साँच्चै हास्यपात्रका रूपमा मात्र परिचित थिए । अर्थात् खानामा अचार जस्तो चलचित्रमा चट्पटे कलाकारको उपस्थिति गराइन्थ्यो । एउटा हास्य कलाकारलाई नायक बनाएर कुनै नेपाली चलचित्र बनेका थिएनन् । यादवले चर्चित हास्यकलाकारहरू मदनकृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्यलाई लिएर हास्य कलाकारलाई नायकका रूपमा प्रस्तुत गर्दै बनाए चलचित्र ‘लोभीपापी ।’
उसो त यादवको परिचय अझै पूरा भएको छैन । झण्डै ८ दशक उमेर टेक्न लागेका यादव खरेलको उर्वर युवा उमेर त पत्रकारिता वा सञ्चारकर्ममा पो बितेको थियो ।
१७ वर्षको उमेरमै रेडियो नेपालमा बाल, साहित्य र सङ्गीतका कार्यक्रम चलाउन थालेका उनले २ वर्ष बीबीसी विश्वसेवामा समेत काम गरे ।
यसका अतिरिक्त समाजसेवामा उनको विशेष योगदान त छँदै छ ।
यस्ता बहुआयामिक व्यक्तित्व यादव खरेलको समग्र व्यक्तित्वलाई आजको ‘व्यक्तित्व’ स्तम्भमा प्रस्तुत गरेका छौँ ।
कुशल शब्दशिल्पी, चलचित्र निर्देशक, पत्रकार, समाजसेवी यादव खरेलको जन्म १२ फागुन १९९९ मङ्गलबार काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको खरेलथोकमा पिता गोपीकृष्ण खरेल तथा माता सरस्वती खरेलका तेस्रा सन्तानका रूपमा भएको हो । यादवको न्वारनको नाम पद्मनाथ खरेल हो । नाट्य सम्राट बालकृष्ण समले प्रसङ्गवश ठट्टैठट्टामा उनको नामबारे जिस्क्याएपछि उनले आफ्नो नाम पद्मनाथबाट बदलेर यादव राखेका हुन् ।
यादव खरेलका एक दिदी अम्बिकादेवी, एक दाजु श्यामकृष्ण खरेल, २ भाइहरू रामकृष्ण र अच्युतकृष्ण खरेल तथा २ बहिनीहरू गीता र सीता छन् ।
सम्पन्न खरेल परिवारमा जन्मिएका हुन् यादव । उनको परिवार ठूलो भए पनि पहाड (काभ्रे) तथा तराई (सप्तरी)मा समेत निकै ठूलो मौजा (जग्गा जमिन) भएका कारण उनलाई बाल्यकालमा खान, लगाउन कुनै समस्या भएन ।
बाल्यावस्थामा यादव कहिले काठमाडौं, कहिले काभ्रे खरेलथोक र कहिले तराई (सप्तरी)मा बस्थे । सप्तरी जिल्लामा यादवका बुबाको मौजा भएकाले मीनपचास वा जाडोको विद्यालय बिदाको समयमा उनीलगायत परिवारका सदस्य तराई वा सप्तरी जान्थे ।
उनलाई सम्झना छ- त्यसबेला पूर्व-पश्चिम राजमार्ग वा महेन्द्र हाईवे बनेको थिएन । यो २०१०-०११ सालतिरको कुरा हो । यहाँबाट तराई जान भारतको बाटो हुँदै जानुपर्थ्यो ।
‘काभ्रेबाट काठमाडौं हुँदै थानकोटबाट उकालो लाग्दै अमलेखगञ्ज निस्किनुपर्थ्यो', यादव भन्छन्, ‘पैदलै अमलेखगञ्ज पुगेपछि रक्सौलसम्म सानो रेलमा जान्थ्यौँ अनि रक्सौलबाट रेल चढेर भारतै भारत सप्तरीमा भारतको सीमामा पुग्थ्यौँ । त्यसपछि बयलगाडा (गोरुगाडा) चढेर हाम्रो खेती भएको ठाउँ पुग्थ्यौँ ।’
त्यही भएर यादव पहाड र तराई दुवैतिरका रहनसहनसँग नजिक भए । दुवैतिरका भिन्न भूगोल र संस्कृतिसँग परिचित भए । बाल्यकालका उनका स्मृति मुस्किलले सम्झिन्छन् अहिले ।
‘तराई र पहाड गर्दा बाल्यकालमै मलाई नेपाल चिन्न सजिलो भएछ । वातावरणीय, भौगोलिक र सामाजिक-सांस्कृतिक अवस्था नै फरक भएका पहाड र तराईको जनजीवनमा घुलमिल हुन पाउँदा धेरै कुरा सिकेछु बच्चामै’, यादव भन्छन् ।
यादव सम्झिन्छन्, त्यसबेला उनको सप्तरीको मौजामा ठूलो पोखरी थियो । माछा पालिएका थिए । वरिपपरिका सबै मानिस त्यही पोखरीमा आएर बिहानै नुहाउँथे र मात्र खाना खान्थे ।
उनका बुबा सिकारका सौखिन थिए । खेती-किसानी गर्ने बुबासँग एलजी टोटा बन्दुक थिए- सुरक्षाका लागि राखिएका । त्यसबेला भारतको सिमाना भएका कारण सीमानाकातिर चोरी, डकैती धेरै हुने गर्थ्यो । आफ्नो सुरक्षाका लागि भनेर सम्पन्नहरूले बन्दुक राख्न पाउँथे सरकारको अनुमति लिएर ।
उनका बुबासँग पनि थिए बन्दुक । ती बन्दुकका कारण उनको घरमा कहिल्यै डकैती लागेन । ‘सबैलाई थाहा थियो, मेरा बुबासँग बन्दुक छन् भन्ने, सायद त्यही भएर कोही पनि डकैती गर्न आएनन् मेरोमा’, यादव भन्छन्, ‘तर, गाउँमा डकैती लागिरहन्थ्यो ।’
बुबाले ती बन्दुक डाका वा चोरका लागि कहिल्यै प्रयोग गर्नुपरेन तर सिकारका लागि भने खुबै प्रयोग गरेको यादव सम्झिन्छन् । ‘गागन भन्ने ठूलो चरो हुन्थ्यो, त्यो चरोको सिकार गर्न बुबा खुब रमाउनुहुन्थ्यो’, यादव भन्छन्, ‘आफू चराको मासु खानुहुन्नथ्यो बुबा तर गाउँभरका सबैलाई पकाएर बाँड्नुहुन्थ्यो ।’
गागन चराको सिकार गर्न उनका बुबाले बयल (गोरु)को प्रयोग गर्थे रे ! एउटा गोरुलाई अगाडि लगाएर आफू गोरुसँग छलिएर चरो भएका ठाउँमा छेउमा पुगेर बन्दुक पड्काउने गरेको दृश्य उनको मानसपटलमा अझै ताजा छ ।
त्यसबेलाको नेपाली समाजमा नेपाली नोटभन्दा भारतीय मुद्रा नै बढी चल्थ्यो । अझ सीमानाकामा त भारतीय मुद्रा मात्र चल्थ्यो । पछि राजा महेन्द्रले भारतीय मुद्राको सट्टा नेपाली मुद्रा चलाउन सुरु गरेको यादव स्मरण गर्छन् ।
उसो त, त्यसबेला भारतीय सीमामा भएका विद्यालयमा भारतीय राष्ट्रियगान नै गाइन्थ्यो । ‘जनगणमन’ गाएको उनलाई प्रस्ट सम्झना छ । उनी मीनपचासको बिदामा तराई जाँदा २ महिना त्यहीँका विद्यालयमा पढ्थे । त्यहाँ पढ्दा गाएको उक्त भारतीय राष्ट्रियगान उनले सरर नबिराई सुनाए ।
तराईमा त्यसबेला बस्ती कम नै थियो । औलोको डरले पनि धेरै मानिस पहाड वा हिमालतिरै बस्थे, तराई झर्न डराउँथे । त्यही भएर तराईमा जंगल बढी र बस्ती कम थियो ।
यादवलाई त्यसबेला तराईमा स्थाल कराएर थर्कमान बनाएको याद छ । ‘त्यसबेला कच्ची घर, झुपडी मात्र हुने, राती स्याल कराउँदा निकै त्रास हुन्थ्यो’, यादव भन्छन् । उसो त, तराईमा सबैभन्दा डर हुने भनेको सर्प र सेतो मच्छडको हो । उनलाई भने सर्पसँग धेरै डर लाग्ने रहेछ ।
सँगसँगै निकै ठूलो हुरी-बतासको पनि सम्झना छ उनलाई । झुपडी उडाउनेगरी आउने हुरी-बतासले सबैको सात्तो खान्थ्यो रे !
२००७ सालको मधुरो सम्झना
२००७ सालमा १०४ वर्षे जहानियाँ राणा शासनको अन्त्यका लागि भएको आन्दोलनको मधुरो सम्झना छ यादवसँग । उनी त्यसबेला ८ वर्षका थिए ।
उनले अरू सबै कुरा त थाहा पाएनन् तर त्यसबेला राणाविरोधी आन्दोलनको अगुवा नेपाली कांग्रेसबारे भने सुनेका रहेछन् । त्यो पनि गाउँमा चलेको हल्लाका कारण ।
त्यसबेला राणाहरूले हल्ला फिँजाएका थिए- कांग्रेस खतनाक समूह हो । यही भएर गाउँघरमा त्यसबेला कसैलाई श्राप दिँदासमेत ‘तेरा घरमा कांग्रेस पसोस्’ भनिन्थ्यो रे ! यसको आसय, कांग्रेस भनेको समाजका लागि, मानिसका लागि अनिष्ट थियो त्यसबेला ।
हो, त्यही सन्दर्भमा उनले सुनेका थिए- ‘कांग्रेस आयो, कांग्रेस आयो ।’
तर, कांग्रेस को हो, के हो, किन आयो ? उनलाई पछिसम्म पनि थाहा भएन । जब थाहा पाए अनि मात्र बुझे कि देशमा प्रजातन्त्र आएछ ।
२०१५ सालको आमचुनाव
यादव २०१५ सालको पहिलो आमचुनावका बेला १६ वर्षका थिए । सामान्य राजनीतिक, सामाजिक चेत हुर्किने उमेरका उनले देखेका उक्त आमचुनावबारे केही स्मरण छन् ।
त्यसबेला राजा महेन्द्र निकै चतुर थिए । यादवकै शब्दमा भन्दा राजा महेन्द्र अत्यन्त सिपालु, साम, दाम, दण्ड, भेद सबै प्रयोग गर्न जान्ने र गर्न सक्ने थिए ।
आमचुनाव हुन नदिन महेन्द्रले योगी नरहरिनाथलाई प्रयोग गरेछन् । नरहरिनाथको ‘कर्मवीर महामण्डल’लाई उपयोग गरेर राजा महेन्द्रले त्रिचन्द्र क्याम्पस अगाडिको चौरमा भेला गराई ‘नेपालको छिमेकी देशसँगको सीमा ठीक भई नसकेकाले चुनाव गराउन ठीक छैन’ भन्न लगाएछन् । त्यसपछि त्यहाँ होहल्ला र तोडफोड भएछ ।
तर, अन्त्यमा आमचुनाव त भई छाड्यो । २०१५ सालको आमचुनावमा नेपाली कांग्रेसले दुई तिहाइ बहुमत ल्यायो । बीपी कोइराला प्रधानमन्त्री बने ।
चुनाव जितेर प्रधानमन्त्री भएपछि बीपी जनतालाई धन्यवाद दिन निस्किए । यादव सम्झिन्छन्, ‘बीपी प्रधानमन्त्री भएपछि जनतालाई अभिवादन गर्दै सानो जीपमा चढेर हात हल्लाउँदै हिँडेको देखेको हुँ ।’
१ पुस २०१७
उनी त्रिचन्द्र क्याम्पसमा पढ्दै थिए । उनका सहपाठी काठमाडौं महानगरका पूर्वप्रमुख पीएल सिंह, पूर्वमन्त्री मार्शलजुलुम शाक्यलगायत थिए ।
यादव त्यसबेला डिल्लीबजार बस्थे । राजा महेन्द्रले प्रजातन्त्रको अन्त्य गरेर देशको शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिए भन्ने सुने उनले । के भइरहेको छ त बाहिर ? भनेर उनी हेर्न निस्किए ।
टुँडिखेल त्यसबेलादेखि नै मान्छे भेला हुने केन्द्र थियो । निकै धेरै मान्छे हुन्थे त्यहाँ- घुम्न आउनेदेखि साना व्यापार, व्यवसाय गर्नेसम्म ।
तर, २ पुस २०१७ का दिन टुँडिखेल सुनसान थियो । उनी त्यतै टहल्दै थिए, अचानक ठूलो आवाज सुनियो माइकमा । कोही भन्दै थियो, ‘राजा महेन्द्र मूर्दावाद, प्रजातन्त्र जिन्दावाद !’
एउटा एक्लो मान्छे माइकमा चिच्याउँदै आएको देखे यादवले । जब त्यो ठिटो नजिक आइपुग्यो, यादव चकित भए- आफ्नै सहपाठी साथी मार्शलजुलुम शाक्य थियो यसरी राजाको विरुद्ध नारा लगाउने ।
'ओहो, मार्शलको त्यो साहस ! त्यो आँट र प्रजातन्त्रप्रतिको समर्पण देखेर म निकै चकित भएँ’, यादव भन्छन् ।
महेन्द्रले शासन लिएपछि डा. तुल्सी गिरी, नवराज सुवेदीहरूलाई साथमा लिएर सत्ता चलाए, निर्दलीय ।
यादव महेन्द्रलाई पृथ्वीनारायण शाहपछिका चतुर र राष्ट्रवादी नेता मान्छन् । ‘हो, प्रजातन्त्रको अन्त्य गर्नु उनको कमजोरी होला’, यादव भन्छन्, ‘तर, राष्ट्रवादका हिसाबले मेहन्द्रजतिका पाउन गाह्रो छ ।’
यादवको परिवार खान, लगाउन राम्ररी पुग्ने परिवार हो । अझ ऊबेलाको जमिन्दार परिवार । सम्पन्न परिवारका सदस्य भएका कारण पनि उनलाई पढ्ने कुरामा कुनै अप्ठ्यारो भएन ।
उनले काभ्रे र सप्तरीबाट प्राथमिक शिक्षा पूरा गरे । ऊबेला नेपालबाट एसएलसी लिने चलन थिएन । भारतको पटना बोर्डबाट मेट्रिक परीक्षा दिनुपर्थ्यो । उनले २०१५ सालमा मेट्रिक उत्तीर्ण गरे ।
यसपछि उच्चशिक्षाका लागि काठमाडौं आए । त्रिचन्द्र क्याम्पसबाट आईए र बीए पूरा गरे । उनी त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सुरुको व्याचका स्नातकोत्तर (एमए)का विद्यार्थीसमेत हुन् । २०२१ सालमै यादवले त्रिविबाट अर्थशास्त्रमा एमए पूरा गरे । त्यसबेला त्रिवि अहिलेको त्रिपुरेश्वरको वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर भएको स्थानमा थियो ।
त्यसबेला उनी बिहान र दिउँसो रेडियो नेपाललगायतका ठाउँमा काम गर्दै बेलुका बीएल वा कानुनमा स्नातक पढ्न थाले । केही समय त्यसबेलाको नेसनल कलेजमा पनि पढाए । शंकरदेव पन्त (शंकरदेव क्याम्पसका संस्थापक)को विद्यालयमा पनि यादवले केही समय पढाएको बताउँछन् ।
उनले त्यसबेला पढाएका केही व्यक्ति मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा विशेष स्थानमा पुगेका छन् । उनीहरूले उनलाई भेट्दा गर्ने गुरुको सम्मान र आदरबाट उनी पुलकित बन्छन् ।
रेडियो नेपाल प्रवेश
यादवले २०१६ सालदेखि ९ वर्षसम्म रेडियो नेपालमा काम गरे । त्यहाँ उनले सुरुमा बालबालिकाको कार्यक्रम ‘बालबाटिका’ चलाए । त्यही बालबाटिकाका उत्पादन हुन् अहिलेका साहित्य, कला र सङ्गीतका विशिष्ट साधकहरू राजेन्द्र थापा, शम्भुजीत बाँस्कोटा, भुवन केसी, नरहरि आचार्य, दीपक जंगम, सन्तोष पन्त, लक्ष्मी गिरी आदि ।
दरबारबाट आएको त्यो फोन
उनी ‘बालबाटिका’ निरन्तर चलाइरहेका थिए । एक दिन अचानक दरबारबाट फोन आयो । रेडियो नेपालभर हल्लीखल्ली मच्चियो- दरबारबाट फोन आयो, के भयो ? भनेर ।
उनलाई भने कुनै चिन्ता लागेन ।
भएछ के भने, उनको बालबाटिका कार्यक्रममा एउटा बालकले पढेको कविता राजा महेन्द्रले सुनेका रहेछन् । महेन्द्रलाई उक्त कविता निकै मनपरेछ । र, उक्त बालकलाई बक्सिस स्वरूप ५ सय रुपैयाँ दिन चाहेका रहेछन् राजाले ।
बालकलाई राजालाई भेट्दा के भन्ने ? भनेर सिकाएछन् । बालकलाई राजाले ‘यो पैसा के गर्छौ ? भनेर सोध्दा ‘किताब किन्छु’ भन्न लगाएछन् र ५ सय रुपैयाँ राजाबाट बालकले लिएछन् ।
यादवले विस्तारै रेडियो नेपालमा अन्य कार्यक्रम पनि चलाउन थाले । उनले साहित्यिक कार्यक्रम ‘काव्यकुञ्ज’, ‘गीतिकथा’, ‘प्रश्नोत्तर’ आदि चलाए । यसका अतिरिक्त हरिप्रसाद रिमालले निर्देशन गर्ने रेडियो रूपक (नाटक)मा समेत उनले मूलपात्रका रूपमा भूमिका निभाए धेरै वर्ष ।
प्रत्यक्ष प्रसारणमा यादव नै अगाडि
रेडियो, टेलिभिजनमा प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न सकिन्छ । त्यसबेला रेडियो नै भर्खर नेपालमा प्रसारण हुन थालेको थियो, टेलिभिजनको त कल्पनासम्म थिएन ।
रेडियोबाट प्रत्यक्ष प्रसारण हुन्थे केही कार्यक्रम, जस्तो कि राजाको सवारी, राजाका विशेष कार्यक्रम र सम्बोधन वा विशेष चाडपर्व ।
एक पटक राजा महेन्द्रको सवारी रहेछ । भोग्यप्रसाद शाहले सँगै एयरपोर्ट जान भने । उनी सँगसँगै एयरपोर्ट गए ।
प्रत्यक्ष प्रसारणको समय आयो । उनी कुनै तयारीमा थिएनन् । अचानक शाहले यादवलाई माइक दिए ।
यादवले फरर प्रसारण गरिदिए । उनी सम्झिन्छन्, ‘त्यसबेलाको नामी पत्रिका नयाँ समाजले सम्पादकीयमुनि रेडियो रिले (प्रत्यक्ष प्रसारण)मा राम्रो भयो भनेर लेखेछ । त्यसपछि त प्रायः राजाको सवारीमा म नै जाने गर्थें प्रत्यक्ष प्रसारणका लागि ।’
यादवले रेडियो नेपालमा ‘व्यापारिक सेवा’ नामक कार्यक्रम पनि चलाए । उक्त कार्यक्रममा विज्ञापन बजाइन्थ्यो र फर्माइसका गीतहरू पनि । उनी जुन गीत बज्थ्यो, त्यसको कमेन्ट कविता वा शायरीमा गर्थे ।
रेडियो नेपालका ९ वर्षलाई यादव आफ्नो व्यक्तित्व विकासको उर्वर समय मान्छन् । ‘रेडियो नेपालकै पृष्ठभूमिका कारण मैले बीबीसीमा काम गर्ने मौकासमेत पाएँ’, यादव भन्छन् ।
पढाइ चलचित्र, काम बीबीसीमा
उनी ब्रिटिस काउन्सिलको छात्रवृत्तिमा चलचित्र पढ्न बेलायत गए । यो २०२५ सालतिरको कुरा हो ।
त्यहाँ उनले २ वर्ष बस्नुपर्ने थियो- फिल्म स्टडिजमा डिप्लोमा गर्न ।
बीबीसी नेपाली सेवा भर्खर सुरु भएको थियो । नेपाली कार्यक्रम चलाउन राम्रो मान्छे चाहिएको रहेछ । दूताबाससँग राम्रो मान्छे मागिरहेको रहेछ बीबीसीले ।
उनीकहाँ उक्त अफर आयो । तर, उनको पासपोर्टमै अन्त काम गर्न नपाउने भनेर छाप लगाएको थियो ।
उनले दूताबासका कर्मचारीसँग र बीबीसीका मानिससँग पनि यो कुरा राखे । बीबीसीकै पहलमा कसरी हो, उनको उक्त अन्त काम गर्न नपाउने भन्ने बन्देज रद्द गरिदिएछन् ।
त्यसपछि सुरु भयो यादवको बीबीसी यात्रा, जुन उनले २ वर्षसम्म गरे ।
राजा महेन्द्र र युवराज वीरेन्द्रका ती अन्तर्वार्ता
उनी बीबीसीमा भर्खर काम गर्दै थिए । तत्कालीन राजा महेन्द्र अनौपचारिक भ्रमणमा बेलायत पुगेका थिए । आफ्नो देशका राजा, त्यसमाथि सर्वशक्तिशाली अर्थात् कार्यकारी । यादवलाई राजाको अन्तर्वार्ता गर्ने मन लाग्नु स्वाभाविक हो ।
उनले दूताबासमार्फत् राजा महेन्द्रसँग अन्तर्वार्ताका लागि पहल गरे । उनले दूताबासका व्यक्तिमार्फत् राजाका सचिवसम्म प्रस्ताव पुर्‍याए । राजाले सहजै प्रस्ताव स्वीकारे अर्थात् यादवलाई अन्तर्वार्ता दिन राजी भए ।
यादव राजा महेन्द्र बसेको होटलमा गए । उनलाई भेट्नेवित्तिकै राजाले यादवको नामै लिएर उनको र बेलायतका नेपालीका बारेमा सोधे ।
यादवले आफू चलचित्र अध्ययन गर्न बेलायत आएको बताए । ‘राजा स्वयं चलचित्रमा रुचि राख्ने भएकाले मलाई नेपाल फर्किएपछि भेट्न भने’, यादव भन्छन् ।
यादवले अन्तर्वार्तामा राजासँग राजनीतिक कम र अन्य विकासका विषय बढी सोधेको बताउँछन् । ‘मुलुक सञ्चालनका लागि राजाका योजना, अवधारणा र विकासबारे बढी कुरा भयो’, यादव भन्छन् ।
उक्त अन्तर्वार्ता रेडियो नेपालबाट मात्र ३ पटक बजेको र गोरखापत्रलगायत धेरै पत्रपत्रिकामा छापिएको यादव बताउँछन् ।
ब्ल्याक आउट वीरेन्द्रको अन्तर्वार्ता
राजा महेन्द्र बेलायतबाट फर्किएको केही समयपछि तत्कालीन युवराज वीरेन्द्र पनि बेलायत पुगे । बुबाको अन्तर्वार्ता सहजै गरेका यादवलाई हुनेवाला राजाको अर्थात् युवराजको पनि अन्तर्वार्ता गर्न मन लाग्यो ।
उनले दूताबासमार्फत् नै युवराज वीरेन्द्र समक्ष अन्तर्वार्ताका लागि प्रस्ताव गरे तर जवाफ आएन ।
पछि ‘केके प्रश्न सोध्ने हो, पहिला प्रश्न पठाउनू अनि कुरा गरौँला’ भनेछन् युवराजका सचिवले ।
यादवले प्रश्न पठाए तर जवाफ आएन । उनले ठाने, ‘अन्तर्वार्ता दिन मन लागेन होला ।’
तर, होइन रहेछ । दूताबासमा युवराज वीरेन्द्रले विशिष्ट पाहुनालाई बोलाएर भोज दिने कार्यक्रम रहेछ । यादवलाई पनि निम्ता गरिएको रहेछ ।
यादव एक छेउमा बसिरहेका थिए, वीरेन्द्र वरवर सर्दै यादवकै छेउमा आए । वीरेन्द्रले यादवलाई भने, ‘प्रश्न सोध्ने भनेको होइन ?’
यादवले ‘सरकारको निगाह भए अन्तर्वार्ता गर्ने मन छ’ भने ।
तब त्यहीँ एक छेउमा बसेर वीरेन्द्रसँग अन्तर्वार्ता गरेको यादव सम्झिन्छन् । भन्छन्, ‘अन्तर्वार्ताका लागि जवाफ नआएकाले क्यामेरा, रेकर्डिस्ट लगेको थिइनँ, त्यसमाथि विशेष भोजमा । तर, युवराजले हुन्छ भनेपछि कुरा गरेँ । धन्न ! रेकर्डरचाहिँ बोकेको थिएँ ।’
युवराज वीरेन्द्रसँग भने यादवले शिक्षा र विकासका विषयमा कुरा गरेको बताउँछन् ।
उक्त अन्तर्वार्ता बीबीसीमा त बज्यो नै तर अन्त कतै न बज्यो, न छापियो । अगाडि राजाको अन्तर्वार्ता ३-३ पटक बजाउने रेडियो नेपालले युवराज वीरेन्द्रको अन्तर्वार्ता एक पटक पनि बजाएन । गोरखापत्रलगायतका कुनै पनि पत्रिकाले छापेनन् पनि उक्त अन्तर्वार्ता ।
कारण के रहेछ त ?
यादवलाई ३ वटा कारण जस्तो लाग्छ उक्त अन्तर्वार्ता नेपालमा ‘ब्ल्याक आउट’ हुनुका ।
पहिलो, यादवले युवराजलाई सोधेका प्रश्न अलिक कडा र आक्रामक थिए कि भन्ने लाग्छ उनलाई ।
दोस्रो, युवराज वीरेन्द्रले दिएका जवाफ त्यति प्रभावकारी भएनन् भन्ने दरबारलाई लागेको हुन सक्छ ।
तेस्रो, राजा महेन्द्र युवराजको प्रशंसा र चर्चा चाहँदैनथे कि भन्ने लाग्छ यादवलाई ।
नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा योगदान
यादव बेलायतमा चलचित्रमा २ वर्षे डिप्लोमा सकेर नेपाल फर्किए ।
राजा महेन्द्रले बेलायतमा भेट हुँदा भनेका थिए, ‘नेपाल आएपछि भेट्नू ।’
उनी राजालाई भेट्न गए । राजा महेन्द्रले नेपालमा चलचित्रको विकासका लागि योजना लिएर आउन भने ।
यादवले योजना त बनाए तर त्यहीबेला यादवका बुबाको निधन भयो । त्यसको केही समयपछि नै राजा महेन्द्रको पनि निधन भयो ।
तर, त्यसपछि राजा बनेका वीरेन्द्रले यादवलाई नै नेपाली चलचित्रको विकासको जिम्मेवारी दिए ।
‘तत्कालीन सञ्चार सचिवले शाही नेपाली चलचित्र संस्थानका लागि प्रस्ताव गरे’, यादव भन्छन्, ‘संस्थानको संरचना बनाउनेदेखि धेरै काम गर्नुपर्ने थियो । म प्रशासनिक काम गर्ने मान्छे होइन भनेर पन्टिन खोजेँ तर जिम्मेवारी आइलाग्यो ।’
संस्थानको बोर्डमा त्यसबेलाका भव्य व्यक्तित्व थिए । कविवर माधवप्रसाद घिमिरे र नाट्य सम्राट बालकृष्ण समसमेत उक्त बोर्डमा थिए ।
शाही नेपाली चलचित्र संस्थानले त्यसबेलै नेपाली चलचित्रका लागि निकै काम गरेको यादव स्मरण गर्छन् । धेरै जनशक्तिलाई चलचित्रका विविध पक्षबारे अध्ययनका लागि भारतको पुना पठाएको उनी बताउँछन् । बालाजुमा चलचित्र ल्याब बनाएको पनि त्यहीबेला हो ।
भारतबाट प्रकाश थापालाई बोलाएर ‘मनको बाँध’ चलचित्र बनाए संस्थानबाटै, २०२८ सालमा । त्यो २ वार्षभित्र धेरैवटा डकुमेन्ट्री पनि निर्माण गरिए ।
यादवले त्यसबेलै चलचित्र आर्काइभिङ पनि सुरु गरे । हुँदाहुँदा २०३० सालमा सिंहदरबारमा आगलागी भएपछि त्यहाँका फिल्मका चक्का जथाभावी छरिएका देखे यादवले । ती चक्कालाई समेटेर लगेर सफा गरेर आर्काइभिङ पनि गरे ।
पछि राजा वीरेन्द्रलाई यादवले आर्काइभिङ गरेको बारे बताए । वीरेन्द्रले हेर्न ती फिल्म मगाए र दरबार पठाइदिए यादवले । त्यसपछि ती दरबारबाट फर्किए कि फर्किएनन्, यादवलाई पनि थाहा छैन ।
अनि चलिचित्र निर्देशनमा
चलिचित्र नै पढेर बेलायतबाट फर्किएका यादवको रुचि चलचित्र निर्देशन र निर्माणमा नहुने कुरा भएन । उनले चलचित्र निर्देशन भने बेलायतबाट फर्किएको धेरै समयपछि मात्र गर्न थाले ।
उनले पहिलो चलचित्र ‘चेलीबेटी’ २०४६ सालमा निर्देशन गरे । उक्त चलचित्रमा नेपालबाट बेचिने चेलीको कथा छ । उनले त्यसबेलै चलचित्रमा समस्या मात्र उठाएका छैनन्, त्यस्तो गम्भीर समस्याको सहज समाधान पनि दिएका छन् चलचित्रमा- बेचिएकी चेलीलाई समाजमा पुनः विवाह गराएर ।
‘साहित्य, कलाले समस्या मात्र देखाउने होइन, समाधानका उपाय पनि दिनुपर्छ’, यादव भन्छन्, ‘समस्या अनेकौँ छन्, जुन जोकोहीले देखेको हुन्छ तर समाधान कम मान्छेले मात्र देख्छन्, त्यो कला, साहित्यमा देखाउन सके अझ राम्रो ।’
उनले २०४७ सालमा पुनः ‘लोभीपापी’ चलचित्र निर्देशन गरे । उक्त चलचित्रको विशेषता भनेको हास्य कलाकारलाई नायकका रूपमा प्रस्तुत गर्नु र लोभ र पापले मानिसलाई कहिल्यै हित गर्दैन भन्ने सन्देश दिनुभएको यादव बताउँछन् ।
अर्को वर्ष अर्थात् २०४८ सालमै यादवले ‘आँधीबेहरी’ चलचित्र बनाए । उक्त चलचित्रमा समाजमा व्याप्त कुप्रथा छुवाछुतमाथि विद्रोह प्रस्तुत गरिएको छ । एउटा तथाकथित उच्च जातको नायकलाई तथाकथित तल्लो वा दलित वर्गकी नायिकासँग विवाह गराइएको छ यस चलचित्रमा ।
वास्तवमा त्यस समयमा यस्ता विद्रोही, क्रान्तिकारी वा सामाजिक रूपान्तरणका विषयलाई साहित्य, कलामा प्रस्तुत गर्नु जोखिम नै हुन्थ्यो । तर, यादवले सहजतापूर्वक त्यसलाई प्रस्तुत गरेर वाहवाही पनि पाए । निकै लोकप्रिय बने उनका यी चलचित्र ।
उनको अर्को लोकप्रिय र चर्चित चलचित्र हो, ‘प्रेमपिण्ड ।’ ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा २०५० सालमा बनेको यस चलचित्रलाई अमेरिकाको एउटा विश्वविद्यालयले आर्काइभ गरेको छ । उनको अर्को बायोपिक ‘आदिकवि भानुभक्त’लाई पनि उक्त विश्वविद्यालयले आर्काइभ गरेको यादव बताउँछन् । नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आर्काइभ गरिएका यिनै २ चलचित्र भएको उनको भनाइ छ ।
‘प्रेमपिण्ड’मा यादवले २ सय वर्षअघिको नेपाली समाज (शासकीय तहदेखिको) प्रस्तुत गरेका छन् । यस चलिचित्रको ‘गैरी खेतको शिरै हान्यो’ गीत, जुन यादवकै शब्द रचना हो, अत्यन्तै लोकप्रिय पनि रह्यो ।
उनले पौराणिक विषयमा पनि चलचित्र बनाएका छन्, ‘श्रीस्वस्थानी’ नामक । २०५२ सालमा बनाएको यस चलचित्रमा हिन्दु समाजमा अत्यन्त रुचाइएको स्वस्थानी कथालाई आधार बनाइएको छ ।
यी चलचित्रका अतिरिक्त उनले ‘नासो’, २०५४ र ‘हत्तेरी’, २०५७ कथानक चलचित्र तथा ‘महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा’, २०६१, ‘बुहारी’, ‘अँध्यारोबाट उज्यालोतिर’ वृत्तचित्र पनि निर्देशन गरेका छन् ।
उनलाई एउटा कुरामा भने पछुतो रहेछ- बीपी कोइरालामाथि चलचित्र बनाउन नसकेको ।
प्रयास त धेरै पटक गरे उनले बीपीमाथि चलचित्र बनाउन तर समय र परिस्थिति अनुकूल भएन ।
उनले धेरै पटक बीपीका छोरा श्रीहर्ष र तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासँग पनि यसबारे कुरा गरे तर बीपीमाथि चलचित्रको कुरा अघि बढेन ।
‘मैले उहाँहरूलाई बुझाउन सकिनँ होला’, यादव भन्छन्, ‘बीपीमाथिको चलचित्र बनाउने मेरो धोको पूरा हुन सकेन ।’
यादव खरेल नेपाली साहित्य लेखनमा समेत सक्रिय छन् । जब उनी रेडियो नेपाल छिरे, उनको सङ्गत साहित्यकार, कलाकार, सङ्गीतकार, गायक, गायिकासँग मात्र हुन्थ्यो ।
यही सङ्गतले उनलाई साहित्यतिर तान्यो । कविता, गीत हुँदै उनी निबन्धतिर पनि मोडिए । उनले बालसाहित्यमा पनि राम्ररी नै कलम चलाए ।
उनका हालसम्म ‘अनि एउटा लहर बिउँझन्छ’, २०२२ कविताकृति, ‘यादव खरेलका मुक्तकहरू’, २०२०/२०४६ मुक्तककृति, ‘समुद्रपारि’, २०३१ नियात्राकृति, ‘खलबल’, २०४७ हास्यव्यंग्य कविताकृति, ‘यस्तो पनि हुँदो रै’छ’, २०४८ गीतसङ्ग्रह, ‘यस्तै रहेछ यहाँको चलन’, २०५९ गीतसङ्ग्रह प्रकाशन भएका कृति हुन् ।
उनले ‘आदिकवि भानुभक्त’ चलचित्रको पटकथा लेखेका छन् भने ‘महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा’ नामक आलेख सङ्ग्रह पनि प्रकाशन गरेका छन् ।
उनका बालबालिकाका लागि झन्डै एक दर्जन कविता र गीतका कृति प्रकाशित छन् ।
कविताबाट सुरु भएको यादवको यात्रामा गीतियात्रा भने निकै मजबुत बन्यो । उनको कुशल गीतकारको परिचय निकै फराकिलो बन्यो ।
आज पनि उनका धेरै गीतहरूले नेपाली श्रोताका कान गुञ्जायमान छन् । माथि पृष्ठभूमिमै उल्लेख गरिएका गीतहरूले नै उनको गीतिकारिताको ओज प्रस्ट पार्छ ।
हालसम्म उनका गीतमा अम्बर गुरुङदेखि सत्यराज/स्वरूपराजसम्मले सङ्गीत दिएका छन् भने नारायण गोपाल, प्रेमध्वज प्रधान, फत्तेमान राजभण्डारी देखि नयाँ पुस्ताका शिव परियार, सिन्धु मल्लसम्मले स्वर दिएका छन् ।
उनले ४० वटा नेपाली चलचित्रमा गीत लेखेका छन् । हालसम्म उनका २ वटा भजन एल्बमसहित १५ वटा गीति एल्बम बजारमा आइसकेका छन् ।
उनका बजारमा आएका आधुनिक गीतका एल्बममा ‘नौ घुम्ती’, २०५५, ‘नौ सय खोला’, २०५६, ‘पुस्ता’, २०६९, ‘अविरल यात्रा’, २०६९, ‘लग्यो पछ्यौरी’, २०७४, ‘हराएका गीतहरू’, भाग- १ र भाग- २, २०७१/२०७४ बजारमा आइसकेका छन् ।
यसरी नै उनको २०२० कै दशकमा ‘झङ्कार’ एल्बम आएको थियो भने चलचित्रका गीतहरूको पहिलो डीभीडी ‘सङ्गम’ पनि बजारमा आएको छ ।
उनका सङ्गीतकार नातिकाजीमा समर्पित एल्बम ‘स्वर्णिम सम्झना’, भजन एल्बम ‘पूर्ण मद’, २०६७ र ‘चैतन्य’, २०७४ पनि आइसकेका छन् ।
यादवका ‘देशको सन्तरी’, २०६७ र ‘घडी पनि बोल्छ’, २०७४ बालगीत एल्बम तथा ‘लै बरी लै’, २०७४ लोक सांस्कृतिक गीतहरूको एल्बम पनि आइसकेका छन् ।
उनले बालबालिका, जवानदेखि ज्येष्ठ नागरिकसम्मका लागि गीत लेखेका छन् । ‘टुहुरो ईश्वर’, २०६६ उनको ज्येष्ठ नागरिकमा समर्पित एल्बम हो ।
यादव खरेलको व्यक्तित्व एक-दुई आयाममा छरिएको छैन । उनी चलचित्र निर्देशक, गीतकार, कवि, बालसाहित्यकार, नियात्राकार, मुक्तककार मात्र होइनन्, समाजसेवामा पनि यादवको योगदान र क्रियाशीलता अतुलनीय छ ।
धेरै क्षेत्रमा छरिएर पनि उत्तिकैजसो सक्रिय रहन सक्ने यादवको स्वभाव, समय व्यवस्थापनको कला निकै लोभलाग्दो छ । धेरैले उनीबाट यीबारेमा ज्ञान लिन सक्छन् ।
यादव नेपाल परिवार नियोजन संघदेखि आँखा अस्पताल, नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलगायत धेरै सामाजिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य संस्थामा रहेर काम गरिसकेका छन् । उनले विभिन्न क्षेत्रमा पुर्‍याएको योगदानकै कारण उनी सयौँ संघसंस्थाबाट सम्मानित र पुरस्कृतसमेत भएका छन् ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, २० असार २०७७, ०२:०७:००
नेकपामा ६१ सांसदको ‘नौटङ्की’
भोजराज घिमिरे : मुख्य सचिवदेखि कुशल स्रष्टासम्म
गजलकार डा. प्रदीपकुमार मैनालीसँग कुराकानी
उपत्यकामा काेराेना भुसकाे आगाेझैँ, जुनसुकै बेला विस्फाेट हुन सक्छ